M/weyne Deni oo sheegay in Maamul Goboleedyada ku soo badanayaan dadkii maamuli jiray… – Hagaag.com
M/weyne Deni oo sheegay in Maamul Goboleedyada ku soo badanayaan dadkii maamuli jiray…
Madaxweynaha Maamulka Puntland, Saciid C/laahi Deni ayaa sheegay Maamul Goboleedyada Wadanka ka dhisan inay ku soo badanayaan dadkii maamuli jiray hay’adaha samafalka.
“Waxaa aad u soo badanaya dadka dhalinyarada ah oo khibradooda aqooneyd ay u badan tahay la shaqaynta hay’adihii samafalka ee dalka ka jiray inay Maamulada ku soo badanayaan.” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha ayaa yiri “Habka hay’ado gaamuray oo 70 sano jiray sida ay u dhaqmaan oo muhiimad kooban leh iyo dad kala tagey oo la rabo in dib la isugu soo celiyo sida la rabo in loo maamulo farqi badan ayaa u dhaxeeya.”
Madaxweyne Deni ayaa Puntland ku ammaanay in horumarka ay maanta ku tallaabsatay ay ka dhaxashay jiilba jiilka kale ee ka dambeeya oo isku soo gaara maamulka, iyadoo jiilka dambe uu khibrad ka helayo sida uu yiri jiilkii hore.
Sidoo kale waxa uu sheegay Maamul Goboleedyada kale inaanay heysan fursadda ay haystaan jiilalka Puntland u soo koraaya, inkastoo sida uu sheegay ay dadaal samaynayaan hadana aanay lamid aheyn kuwa Puntland.
Madaxweyne Deni ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa’id oo Arbacadii uu ku qabtay Magaalada Garoowe ee Xarunta Maamulka Puntland.